बालविवाह रोक्न किशोरी वृत्त सक्रिय – इन्सेक
बैतडी ०७३ कात्तिक ३० गते
समाजिक कुरीतिका रूपमा रहेको बालविवाह रोक्न पछिल्लो समय बैतडीका विभिन्न गाउँमा गठन गरिएका किशोरी वृत्त सक्रिय भएका छन् ।
जिल्ला विकास समिति, महिला तथा बालबालिका कार्यालय र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जनसङ्ख्या कोषले किशोरी वृत्तका सदस्यहरूलाई तालिम दिएपछि बालविवाह रोक्न यहाँका किशोरीहरू सक्रिय भएका हुन् ।
बैतडीका १५ ओटा गाविसमा किशोरी वृत्त गठन भएको र ११ ओटा गाविसमा किशोरी वृत्त सक्रिय रहेको जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जनसङ्ख्या कोषका जिल्ला संयोजक गणेश शाहीले बताए ।
शाहीका अनुसार ०७३ वैशाखदेखि ०७३ असारसम्ममा मात्रै १७ ओटा बालविवाहका घटना किशोरी वृत्तको सक्रियतामा रोकिएका छन् ।
'घरबाट जबरजस्ती विवाह गर्न लागेको खबर पाएपछि किशोरी वृत्तका सदस्यहरू मिलेर प्रहरी र सिडियो कार्यालयलाई फोन गर्ने गरेका छौँ । त्यसपछि प्रहरीको सहयोगमा बालविवाह राक्छौँ ।'- रौलेश्वर गाविसमा गठित किशोरी वृत्तकी सदस्य ममता चन्दले भनिन् ।
वृत्तले जिल्लाको सिद्धपुर गाविसमा चार, सिद्धेश्वर गाविसमा नौ, रौलेश्वर गाविसमा दुई र सलेना गाविसमा दुई गरी जम्मा १७ ओटा वालविवाह रोकेको दावी गरेको छ ।
बालविवाह रोक्दा आफुहरूलाई समेत विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू आउने गरेको सिद्धपुर गाविसमा गठित किशोरी वृत्तकी सदस्य निर्मला भट्टले बताइन् ।
'कहिलेकाँही त तिमीहरू जान्ने हुन्छौ ! हामीले तिम्रो विवाह गर्न लागेका हौँ र ? छोरीको विवाह गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न लागेका छौँ । हाम्रो पारिवारिक मामलामा तगारो नबन भनेर उल्टै आफुहरूलाई धम्की आउँछ ।'-सलेना गाविसको किशोरी वृत्तकी सदस्य कुन्ती भट्टले भनिन् ।
आर्थिक अभाव, जनचेतनाको कमी, पारिवारिक बोझ र रजस्वला नहुँदै छोरी-चेलीको कन्यादान गरे पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने गलत मान्यताका कारण धेरै बालिकाहरूको सानैमा विवाह हुने गरेको छ ।
सन् २०२० सम्ममा देशलाई बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुसार बैतडीमा पनि काम थालिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।